Schogetten - chocolate, okuyinto kakade nolunye lwalezo nengxenye eminyaka ekhiqizwa kuleli Trumph inkampani. Ushokoledi kuqala, ikhishwe le brand wethulwa emhlabeni ekhulwini XIX, okungukuthi ngo-1857, futhi kuze kube namuhla akuthandayo abalandeli sweet sweet, ukunambitheka kwakhe emenza ahluke kwabanye.
Kuyini ushokoledi Schogetten?
Schogetten - chocolate, sihluke imikhiqizo nezinye brand hhayi ukunambitheka kuphela, kodwa futhi ifomu ukukhululwa. Omunye Tile iqukethe 100 g ushokoledi, kodwa lula ukusetshenziswa isivele ihlukaniswe tincetu ngabanye. Omunye iphakethe lihlanganisa 18 awafaka ucwecwe izinhlayiya kukhona awukudla simnandi kakhulu, okuyinto ngokufanele ku substrate.
Schogetten - chocolate, ehlanganisa izithako bendabuko. Lokhu cocoa, ushukela, cocoa ibhotela. Ukuze womshini ubisi ushokoledi esimhlophe, ubisi powder isetshenziswa. Futhi, kuhlanganisa ofakwe abahlukahlukene futhi flavorings ezinikeza Tile ngamunye ukunambitheka esiyingqayizivele. Kufanele kuqashelwe ukuthi umkhiqizo loluphawu siqukethe izingxenye zemvelo kuphela.
Izinhlobonhlobo ushokoledi Schogetten
Schogetten - chocolate, okuyinto, ngaphezu izithako ezibalulekile zifaka izithasiselo ehlukahlukene kanye ofakwe. Lokhu nougat namantongomane, nezihlahla zikakhukhunathi, kanye zonke izinhlobo okhilimu, omisiwe kanye amajikijolo.
Kuze kube manje, kukhona 15 izinhlobo kwalo mkhiqizo. Bangakwazi zihlukaniswe amaqembu amathathu: white chocolate, ubisi kanye okumunyu. White Schogetten kuyinto evamile, ngaphandle fillers, kanye yokuwugazinga. Njengoba for ubisi ke sifaka 8 izinhlobo: zakudala (ngaphandle toppings izithasiselo), nephunga elimnandi lama-ikhofi, nougat nati, nge kakhukhunathi, hazelnut cream ne ukunambitheka cappuccino, kanye strawberry kanye ukhilimu.
shokolethe itholakala ezintathu zama - classic kanye ofakwe: tiramisu noma marzipan.
Ngaphandle emabangeni ngenhla, inkampani ukhiqiza Trumph Schogetten - ukuxuba ehlanganisa ezintathu izinhlobo ushokoledi okumhlophe, ebabayo futhi ubisi.
Schogetten - chocolate, ukubuyekezwa zazo ikakhulukazi omuhle. Abathengi waphawula iphakethe lula - kulula ukuvula naseduze, okuyinto evimbela ushokoledi avuke ekuweni kwakhe. Ihlangene futhi yokuthi Tile isivele ihlukaniswe izinhlayiya 18, futhi akudingeki ukuba aphule. Ngokuqondene izimfanelo ukunambitheka, wonke umuntu wazama umkhiqizo yalesi brand, uveza ukuthi lesi sidlo tastier okuningi kunamanye imikhiqizo efanayo intengo kuhlobo olufanayo. Ngisho phakathi kwezinye imikhiqizo ekhiqizwa Trumph inkampani, it is lokhu ushokoledi ubhekwa esiphundu kunazo.
Ngenxa ubuhlobo palatability isembozo yokuqala, ngakho ushokoledi kungaba isipho esimangalisayo nabathandekayo.
Rostov State Conservatory (RGC) kubo. Rachmaninov: ivuma, umnyango, ikhethelo
Kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka ukuba banake isiphephelo somoya ukufuthelana?